SUPER CHAMPIONS: Koobka lagu bedeli doono Champions oo go’aan laga gaarayo (Serie A & EPL oo markale isku dheggan) – Gool FM
SUPER CHAMPIONS: Koobka lagu bedeli doono Champions oo go’aan laga gaarayo (Serie A & EPL oo markale isku dheggan)
(Monte Carlo) 24 Agoosto 2016 – Kooxda AS Roma ayaa u dhacday Europa League, taasoo marka la eego kootada qiimaynta kala sarreeynta ee UEFA rankings, aan u xumayn Talyaaniga, waayo Europa League way sahlan tahay in dhibco laga keeno.
Waloow ay Talyaanigu dib u heli karaan booskooda 4-aad kaddib 2018 haddii la ansixiyo qorshe CL loogu bixinayo magaca Super Champions (ama Super League), misna Talyaania oo sanadkii hore ku guul darraystay inay kaalinta 4-aad ka xoogaan EPL mar kale ayay sanadkan isku dayi doonaan. Waa qorshe macquul ah, waayo Talyaanigu haatan waxay Ingiriiska u jiraan 2.19 dhibcood oo qura.
Yeelkeede, UEFA ranking waxay noqon doontaa xusuus hore, waayo wixii ka bilowda 2021, waxaa iman doona Super Champions, kaasoo ay Talyaanigu dib ugu heli doonaan kaalinta 4-aad, iyagoo ay wehliyaan dalalka Spain, England iyo Germany, kuwaasoo haddii qorshahan la isku raaco yeelan doona min 4 kooxood oo toos u iman doona isreebreeb la’aan.
3-da kooxood oo kaalimaha ugu sarreeya gala toos ayay u iman doonaan, halka kaalinta 4-aad lagusoo geli doono u qalmitaan ”taariikheed”, taasoo anfici doonta kooxaha magaca ku leh CL sida AC Milan, Liverpool, Ajax IWM, haddii ay lacalla kaalimaha sare iman waayaan.
Go’aan ayaa soo bixi doona saacadaha yar ee soo aadan, marka ay magaalada Monte Carlo ku shiraan kooxaha waawayn Yurub ee ku midaysan jamciyadda ECA, kaddibna waxay u gudbin doonaan guddiga tartamada, kahor inta aysan si rasmi ah ugu dhawaaqin Guddiga Fulinta UEFA.
Inkaartii isreebreeb-horaadka Champions League ka haysatey kooxaha Talyaaniga oo sii socota! (Imisa jeer ayay hareen?)